Scrolla Izindaba | Page 585
Amaphoyisa agasele ipulazi eNtshonalanga yeKapa
TT3 - 6th Oct 2020 0
Ukugasela kwamaphoyisa epulazini lensangu e-Worcester eNtshonalanga yeKapa kuveze inqolobane yezikhali nensangu eyenele ukubhenywa i-Boland yonke kuze kufike uKhisimusi.
“Vikela owesifazane omnyama” kusho uMegan Thee Stallion
Umculi uMegan Thee Stallion wenze isitatimende esinamandla ngabantu besifazane abamnyama ngenkathi ecula kumabonakude ngoMgqibelo ebusuku.
Libhekene namanye amacala iphoyisa elisolwa ngokubulalala abahlanu ukuze lizuze eyomshwalense
Scrolla Africa - 5th Oct 2020 0
Owayengusayitsheni wamaphoyisa othweswe icala lokubulala kanye nokwakha uzungu lokubulala izihlobo ezisondelene naye ukuze ezothola imali yomshwalense, wandiselwe amacala amasha phezu kwalawa abekwe wona.
I-Nigeria ithuthukise ubuchwepheshe bokuhlolela i-Covid-19
Ososayensi base-Nigeria bathuthukise ubuchwepheshe bokuhlolela i-Covid-19 baveza imiphumela ngemizuzu engama-40.
I-Sundowns ithole abaqeqeshi ababili
I-Mamelodi Sundowns iqoke abaqeqeshi abayinhloko ababili abazongena esikhaleni sikaPitso Mosimane.
Bashaywe engeqiwa ntwala abadlali abadumile bebhola lezinyawo
Ibhola lamaNgisi belihamba phambili ngeSonto ngemuva kokuthi amaqhawe e-Premier League adlalela i-Liverpool ashaywe yi-Aston Villa ngamagoli ayisikhombisa kwamabili.
I-Blaq Diamond ihlukanise inhloko nesixhanti eMpumalanga
I-Blaq Diamond ijabulise abantu ngomculo wayo emcimbini we-South African Traditional Music Awards (SATMAs) ngoMgqibelo ebusuku.
“Ubani onendaba nokhisimusi?” Kubuza uNkk Trump
Scrolla Africa - 3rd Oct 2020 0
Isihloko sodaba simayelana naye nomyeni wakhe abahlole batholakala negciwane le-Corona.
1...584585586...604Page 585 of 604